တောင်ရေးမြောက်ရေး: အလောင်းအစား ၂
Posted by ဘာတွေတုန်း at 5:06 AM
စိတ်ဝင်စားပြီး သိချင်လွန်းလို့ ညဘက်ကြီးဖတ်သွားတယ်။ ရေးထားတာ ကောင်းတယ်ဘာဘာရေ ... အမတော့ အဲဒီအကြောင်း မကြားဖူးဘူး။ ဒီလိုအလောင်းအစားမျိုးကတော့ အန္တရာယ်များပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုတော့ ဘယ်လောက်ပေးပေး မလုပ်ရဲဘူး (သတ္တိ သတ္တိ) :P
အင်း အရေးသား တော်တော်ကောင်း ပါတယ်. likeaprofessional.
a stupid boy said...
I kinda knew that one of the friends was pretending asadead body but couldn't figure out why he could stay without moving.
Only after the end, I came to know that he was injected.
ခုမှဖတ်မိတယ်.. သနားဖို့သိပ်ကောင်းတာပဲ.. ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်..
ဒါကိုတော့ မတရားဘူးလို့ ထင်ပါတယ် အလောင်းကောင် လို့ ပြောရင် အလောင်းဘဲ ထားသင့် တာပေ့ါ။ ဒါကတော့ ညစ်ပတ်တာလို့ မြင်ပါတယ် ဂတိတလုံးမတည်တဲ့အတွက် နောက်ဆက်တွဲ မဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်တာလို့ မြင်ပါတယ်။
ဆောင်း ပြောသလို ပါဘဲ.. မလုပ်သင့်တဲ့ အလောင်းအစား မျိုးဖြစ်တဲ့ အပြင် အမှန်အတိုင်း မဖြစ်တော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့
ဟုတ်ပါတယ် ညစ်ပတ်တဲ့ လောင်းကစားတခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ် ဒါကြောင့်လည်း မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့...
ကွန်မန့်ခြေရာလေးတွေ ချန်ခဲ့တဲ့ သူတွေ အားလုံး ကျေးဇူးပါရှင်... :)
Soe Myat Hein said...
ayay atar ayan kg tal, wit htu' sayar ma kya nay tar pal.. myanmar sar lal ma read ya tar kyar p.. har ta story lo' htin htar tar.. tanar sayar taw taw kg tal...